Shirkadee mobiilkee baa leh Internetka ugu dhaqsaha badan 4G LTE? 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Talyaaniga gudahiisa, shabakadaha mobilada waxaa ku dhacay isbadal weyn marka loo fiiriyo waagii hore iyo kadib midowgii udhaxeeyay labo kamid ah afarta shirkadood ee ugu waawayn internetka, Wind iyo sadex, waxaan heysanaa galitaanka aaga howlwadeenka Iliad, kaasoo sicirkiisu hooseeyo waxay la sameyneysaa tartan weyn shirkadaha kale ee dhaqanka (in ka badan 3 milyan oo isticmaaleyaal ah sanad iyo badh). Laakiin dhammaan hawl wadeenadan Kuwee waa inaad doorataa iyadoo lagu saleynayo xawaaraha isku xirka internetkaaga? Way fududahay in la qaato balanqaadyada beenta ah ee xayeysiinta iyo sawirada ay bixiyaan howl wadeenka laftiisa (badanaa been ah) oo tilmaam howlwadeenka qaldan ee magaaladeena ama deegaanka aan ku nool nahay.
Haddii aan runtii dooneyno inaan ogaano oo ah shirkadda mobilada leh internetka ugu dhaqsaha badan 4G LTE Aaggeenna, waxaad ku gaadhay hagaha habboon: halkan waxaan ku tusi doonaa dhammaan tijaabooyinka madaxa-bannaan ee ay qaadaan dhinac saddexaad ama adeegsadayaasha hawlwadeennada kaladuwan laftooda, si aad si sax ah u ogaan karto haddii uu jiro daboolid wanaagsan oo ku saabsan waddada aan ku nool nahay (waa muhiim xawaare fiican) iyo xawaare intee le'eg ayaan ku gaari karnaa hawlwadeenka la doortay.
AKHRISO: Barnaamijka tijaabada shabakada xogta moobilka
Hawl wadeenka ugu dhaqsaha badan internetka ee LTE
Cutubyada soo socda waxaan ku tusi doonaa tijaabooyinka ay sameeyeen dhinacyo saddexaad si loo hubiyo xawaaraha isku xirnaanta khadka internetka ee waddanka oo dhan iyo, kuwa doonaya inay ogaadaan xawaaraha magaalada ama waddada ay ku nool yihiin, waxaan sidoo kale ku tusi doonaa qalabka awood u yeelo inuu sameeyo tijaabada si madaxbanaan, adigoon marka hore iibsan SIM. Waqtigaas Waxaan arki doonaa oo kaliya 4G LTE tikniyoolajiyad, weli aad u baahsan oo awood u leh inuu bixiyo xawaare wanaagsan dhammaan duruufaha (waxaan ka helnaa 5G kaliya magaalooyinka waaweyn).
Imtixaannada jirka ee madaxa bannaan
Haddii aan rabno inaan isla markiiba ogaanno kan ugu fiican ee talyaani ah ee celceliska xawaaraha khadka taleefanka gacanta, waxaan soo dejin karnaa oo aan falanqeyn karnaa PDF-ka ay bixiso shirkadda SpeedTest, oo sannad kasta abaalmarin siisa shabakadda moobiilka ugu dhaqsaha badan Talyaaniga.
Marka loo eego garaafka iyo xogta ay soo tabisay daraasaddan, shabakadda ugu dhakhsaha badan LTE ee Talyaaniga ayaa ah Dabaysha Tre oo wadarta dhibcaha 43,92 (ku guuleystay abaalmarinta Speedtest). Ku dhowaad 10 dhibcood ayaa naga dambeysa TIM oo leh 32,95 dhibcood, Iliad leh 31,34 dhibcood iyo dabada layaabka leh Vodafone, taas oo ku gaarto imtixaanada kaliya dhibcaha 30,20. Xogtaani waxay soo bandhigeysaa waxyaabo badan oo layaableh oo hoos u dhigaya waxyaabo badan: Wind Tre ayaa hogaamineysa waxayna garaacaysaa TIM (oo had iyo jeer loo tixgeliyo kan ugu fiican Talyaaniga) iyo Vodafone ayaa si xun u burburay, sidoo kale waxaa garaacay Iliad (imaatinka ugu dambeeyay).
Si loo xoojiyo xogtan loona turjumo si sax ah waa inaan tixgelinno mid kale hay'ad madax-bannaan oo loogu talagalay tijaabooyinka xawaaraha, taasi waa in la yiraahdo OpenSignal (milkiilayaasha arjiga caanka ah). Markaad gasho boggaga internetka ee 'snapshots snapshots', waxaan eegi karnaa gobollada ugu waaweyn ee Talyaaniga, annaga oo isbarbardhigeyna caymiska dhammaan hawlwadeennada magaalooyinka, hareeraha iyo baadiyaha.
Adoo si taxaddar leh u falanqeynaya jaantusyada, waxaan arki karnaa in Fastweb iyo TIM ay sifiican ugu shaqeynayaan dhammaanba dhacdooyinka (gaar ahaan xaafadaha), WindTre waxay ku jirtaa kaalinta labaad xawaaraha magaalooyinka waxayna ku badan tahay meelaha miyiga ah iyo Vodafone sidoo kale kiiskan ayaa ah hawl wadeenka ugu xun (haddii laga reebo meelaha magaalooyinka ah ee Lombardy iyo Sicily). Hawlwadeenka Iliad ayaa ka maqan garaafkan, looma tixgelinayo baaritaanka (waxaa suuragal ah in la geliyo mustaqbalka).
Sida loo tijaabiyo xawaaraha shabakadaada naftaada
Ma dooneyno inaan raacno soo jeedinta imtixaanka madaxbannaan oo waxaan rabnaa inaan "taabanno" xawaaraha shabakadda aaggeenna ama guriga? Xaaladdan oo kale, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho caymiska iyo khariidada xawaaraha ee la siiyo Nperf, waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah.
Laga soo bilaabo boggan waxay ku filnaan doontaa in la doorto hawlwadeenka si loo tijaabiyo loona hubiyo labadaba shabakadda (LTE iyo LTE Advanced) iyo xawaaraha dhabta ah ee ay soo sheegaan imtixaannada ay qaadeen adeegsadayaashu. Markaad dooratid hawl wadeenka, dhagsii Caymiska shabakadda ama isaga Xawaaraha soo dejinta Si loo doorto tijaabada la qaadayo markaa isticmaal khariidada hoose si aad u raadiso magaalada, aagga ama waddada aan ku noolahay ama halka aan dooneyno inaan tijaabino, sidoo kale adoo adeegsanaya goobta baaritaanka ee laga heli karo qeybta bidix ee kore ee khariidada. Qalabkani wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u leh, tusaale ahaan haddii ay tahay inaan iibsanno guri cusub ama kiro, si aan u hubino cidda ka shaqeyneysa oo wanaagsan iyo haddii ay lagama maarmaan tahay in la beddelo SIM-ka iyadoo la ilaalinayo lambarka, sida sidoo kale ku muuqata hagaha. Sida loo sameeyo tirinta tirada iyo bedelka dalabyada taleefanka.
Haddii kale waan isticmaali karnaa codsiga OpenSignal, waxaa laga heli karaa bilaash Android iyo iPhone.
Ku rakibida arjigan iyo bixinta dhammaan rukhsadaha lagama maarmaanka ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku xaqiijino caymiska LTE iyo xawaaraha internetka mobilada waddo kasta ama aag kasta oo ka mid ah Talyaaniga; si loo sii wado, waxa kaliya ee inala gudboon waa inaanu ka furtano liiska hoose Mapa, sug sugitaanka booskayaga ka dibna riix dusha sare ee liiska Dhamaan 2G / 3G / 4G, si aad u furto liiska meesha aad ka dooran karto mobiilka mobilada ah si aad u tijaabiso iyo nooca shabakadda (tijaabadan waxaan kugula talineynaa inaad ka tagto shayga oo keliya 4G).
Imtixaanada ururada madaxa banaan iyo tijaabooyinka aan ku qaadi karno kumbuyuutarkeena ama taleefanka casriga ah, waxaan si dhakhso leh ugu heli karnaa hawl wadeenka internetka ugu fiican aaggeenna, si aan markasta ugu socon karno xawaaraha ugu badan ee suurtagalka ah, annagoon ku dhicin dabinnada iyo xayeysiinta Hawl wadeenadu badanaa waxay aadaan telefishanka ama raadiyaha. Tijaabooyinka madaxa banaan ayaa leh Wind Tre waa shirkada mobilada ugu fiican talyaaniga, laakiin natiijadan waa in si taxaddar leh loo qaataa: waxaa fiican in si shaqsiyan loo hubiyo caymiska loona hubiyo inay si wanaagsan ula jaanqaadayso gurigeenna ama xafiiskayaga.
Haddii aan raadineyno shabakad moobillo xitaa dheereysa waa inaan xoogga saarnaa 5G, oo aan weli baahsaneyn laakiin ku jirta heer ka sarreeya 4G; si aan waxbadan uga ogaano waxaan aqrin karnaa hageheena Sida loo xaqiijiyo caymiska 5G.
Haddii, liddi ku ah, waxaan raadineynaa hab aan ku xaqiijineyno caymiska fiber optic ee xariiqa go'an, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad aqriso qodobadeena Caymiska Fiber ee TIM, Fastweb, Vodafon, WindTre iyo kuwa kale mi Fiber Optic-ga ugu Fiican: hubi caymiska iyo dalabyada.